Ohabolana sy fitantanana vokatra | Martech Zone
Ohabolana sy fitantanana vokatra
Alakamisy, Jona 29, 2006 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Tsy matetika aho no mijery andinin-tsoratra masina hahazoana aingam-panahy amin'ny fitantanana vokatra sy ny fampandrosoana ny rindrambaiko, fa androany kosa nisy namana iray nandefa teny torohevitra lehibe ho ahy:
Izay mitandrina anatra dia amin'ny lalan'ny fiainana; Fa izay mandà ny fananarana no mania.
Ohabolana 10: 17
Izay tia fananarana no tia fahalalana; Fa izay mankahala fananarana dia adala.
Ohabolana 12: 1
Fahantrana sy henatra no ho an'izay mankahala fananarana; Fa izay mino anatra dia homem-boninahitra.
Ohabolana 13: 18
Tsy azo tenenina ny teny tsara kokoa. Mianara misimisy kokoa, misokatra, ekeo ny fitsikerana, ary mianara amin'ny lesoka nataonao.
Tags: fanitsianafampianaranafahalalanafitantanana ny vokatraohabolana
Natomboka ny famoahana Resort!
Manambola amin'ny olona. Tsy ho diso fanantenana ianao.